हुनेछ एक सेतो मान्छे मिति एक भारतीय केटी । भारतीय डेटिङ
ठीक छ, म एक अमेरिकी केटी भारतीय मूल को छ । मेरो आमाबाबुले देखि उत्प्रेरित भारत । म जान्न चाहन्छु हुनेछ सेतो मान्छे मिति एक भारतीय केटी । र, म छु भइरहेको गम्भीर छ । किनभने कि तिनीहरूले हुनेछ वा जस्तै, यो देखिन्छ यो त धेरै कठिन तिनीहरूलाई लागि.
ठीक छ, म एक अमेरिकी केटी भारतीय मूल को छ । मेरो आमाबाबुले देखि उत्प्रेरित भारत । म जान्न चाहन्छु हुनेछ सेतो मान्छे मिति एक भारतीय केटी । र, म छु भइरहेको गम्भीर छ । किनभने कि तिनीहरूले हुनेछ वा जस्तै, यो देखिन्छ यो त धेरै कठिन तिनीहरूलाई लागि. मलाई थाहा छ को कारण छ छन् किनभने को एक गुच्छा कि मान्छे मा लक, हामीलाई निम्न जस्तै जो म गर्न चाहनुहुन्छ खण्डन गर्नु: भारतीय बालिका बास्ना को मसालेदार खाना र प्याज — वाह यो बस आउँछ, जसले मानिसहरूलाई लाग्छ भारतीय बालिका कुक सबै समय र मात्र एक प्रकार को खाना छ । म मात्र एक उच्च विद्यालय वरिष्ठ, तर म गम्भीर रमाइलो भारतीय खाना, इटालियन, चिनियाँ, मेक्सिकन, सबै । भारतीय बालिका धेरै सख्त आमाबाबुले — राम्रो शायद केही. म सबैभन्दा खुला झुकाउ, आमाबाबुले तिनीहरूले पूर्णतया खुला छन् मलाई डेटिङ कुनै र साँच्चै पकड कुनै. तिनीहरूले राम्रो छौं उदारवादी मा आफ्नो सिद्धान्त छ । भारतीय केटीहरूलाई लागि प्रतीक्षा सेक्स — खैर केही छैन, बस को रूप मा अन्य सबै जात छ । व्यक्तिगत, म असहमत भनेर विवाह गर्नुपर्छ अचानक दिन लेबल सेक्स तपाईं सेक्स तपाईं महसुस गर्दा यो सही हो । भारतीय बालिका सुपर धार्मिक — त्यहाँ छन् भक्त हिन्दूहरू भारत मा, तर छैन सबैलाई छ । र यो कुरा हिन्दूहरू छ कि यो सबैभन्दा खुला धर्म. यो गले यति धेरै अन्य धर्म, बस हेर्न र विविधता को धर्म भारत मा. भारतीय बालिका सुपर धार्मिक — त्यहाँ छन् भक्त हिन्दूहरू भारत मा, तर छैन सबैलाई छ । र यो कुरा हिन्दूहरू छ कि यो सबैभन्दा खुला धर्म. यो गले यति धेरै अन्य धर्म, बस हेर्न र विविधता को धर्म भारत मा. धर्म गर्न सक्छ तपाईं रोक्न देखि एक केटी डेटिङ. व्यक्तिगत, म विचार मलाई एक हिन्दु नास्तिक. म विश्वास मा मात्र भाग धर्म, तर यो चरम गर्न । सबै भारतीय छन् कट्टर शाकाहारियां — म राम्रो छु, यो एक भन्दै द्वारा धेरै मानिसहरू प्रतिबन्ध मासु । मात्र वास्तविक मासु भन्ने लगभग सबैले रहन्छ टाढा छ गाई मासु । तैपनि, आजकल धेरै मासु खान । म फिट स्टीरियोटाइप, किनभने तथापि, म व्यक्तिगत छान्नुभएको एक शाकाहारी बन्न किनभने म विश्वास, यो नैतिक सही कुरा गर्छन् । तैपनि, मेरो सारा परिवार खान्छ मासु । विशेष लक्ष्य सेतो मानिसहरू । तर म अन्य जात भारतीय बालिका रूपमा धेरै, र यति टी यो सम्बोधन कि तरिका हो । म छु डेटिङ एक भारतीय केटी अहिले र हामीलाई बस भन्न उनको आमाबाबुले को भक्त हिन्दु आमाबाबुले तपाईं बारेमा कुरा गर्दै छन्. हामी भएको छ साँच्चै घनिष्ठ मित्र लागि अब वर्ष र लागि मात्र बारेमा छ महिना डेटिङ गरिएको छ । अहिले, उनको आमाबाबुले लाग्छ भङ्ग गर्न यो तिनीहरूलाई अझै छ । म एम र त्यो एस. म को कहिल्यै सुनेका छन् ती, तर म तिनीहरूले आशा हुनुहुन्छ साँचो छैन । म लाग्छ मेरो प्रेमिका छ तला बाहिर सुन्दर र मलाई थाहा छ त्यसैले धेरै आकर्षक भारतीय बालिका । म सधैं आकर्षित गर्न र तिनीहरूलाई सधैं खाएका साथ राम्रो संग हिन्दू किनभने तिनीहरूले धेरै राम्रो हो, मायालु मान्छे, र छैनन् खराब जस्तै धेरै अमेरिकी गर्छन् । आदरणीय. उनको आमाबाबुले सख्त छन् र धेरै धार्मिक तर त्यो साँच्चै छैन (कारण शोक उनको लागि सडक तल). हामी सेक्स थियो जब हामी महसुस यो सही थियो र हेरचाह बारेमा प्रत्येक अन्य पर्याप्त त्यसो गर्न । म भन्न चाहन्छु मेरो प्रेमिका छ, धेरै हुनत किनभने त्यो यहाँ हुर्क्यो । उनको आमाबाबुले एक हार्ड समय देखेर दृश्य को उनको बिन्दु छ । म मानौं एक दिन उनको आमाबाबुले हो जा गर्न हुन धेरै निराश त्यो तोडने बाधा तर हामी दुवै आनन्दित हुन चाहनुहुन्छ र छ भनेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । म पनि हुँ धेरै आदरणीय गर्न हिन्दू संस्कृति । म यो प्रेम, म साँच्चै प्रेम थियो चिन्न गर्न, उनको परिवार गहिरो, त्यो समेत भएको छ, शिक्षण मलाई बोल्न केही आधारभूत. अरू छ मा एक समान अवस्था र कहिल्यै चाहन्छ, यो छलफल गर्न, म सोच्न यो एक धेरै त गर्न स्वतन्त्र महसुस सन्देश वा ई-मेल मलाई । म साँच्चै छु आशा अपमान उनको परिवार सडक तल. आफ्नो प्रश्नको जवाफ: मलाई लाग्छ, सबैभन्दा ठूलो कारण सेतो मान्छे हुन सक्छ खुला गर्न डेटिङ हिन्दु किनभने संस्कृति बाधा र सख्त आमाबाबुले, म लाग्यो कि बारे धेरै पहिले डेटिङ मेरो वर्तमान तर ख्याल उनको पनि धेरै दिनु भनेर मलाई रोक्न छ । मेरो आमाबाबुले संग यो कुनै ठूलो सम्झौता हो, म गर्न सक्छन्, मिति जसले म चाहनुहुन्छ, म हुँ मसीही, तर हिन्दु यो एक धेरै गम्भीर. म छु जस्तै सेतो तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् — आधा अङ्ग्रेजी, र आधा आइरिस. म छु तलाकशुदा पछि वर्ष र डेटिङ गरिएको छ एक भारतीय महिला नै उमेर को छ । मा रूढिवादी धार्मिक तिर सेक्स पक्ष । म छु क्याथोलिक र बारेमा थिए नै । न थियो, मा एक ठूलो हतार — के गर्न चाहन्थे कुराहरू सही र विचार सही संग टाउको छ । त्यो सबैभन्दा सुन्दर महिला म कहिल्यै. हामी छौं, दुवै एक सानो पुरानो जमानाको छ । व्यक्तिगत, म सधैं लाग्यो भारतीय महिला छन् सुन्दर छ । अरूलाई लाग्छ (.) अर्थ भारतीय बालिका थिए सेक्स मिसिन । मान्छे मान्छे हो — द्वारा गठन जसमा सन्दर्भमा तिनीहरूले बढ्न र बाँच्न र गरेर आफ्नो दृष्टिकोण छ । हो जो एक सुन्दर महिला, मायालु र मायालु कुरा हो गर्न मा पकड गर्न. माथि बढ्न । ठीक छ, म एक अमेरिकी केटी भारतीय मूल को छ । मेरो आमाबाबुले देखि उत्प्रेरित भारत । म जान्न चाहन्छु हुनेछ सेतो मान्छे मिति एक भारतीय केटी । र, म छु भइरहेको गम्भीर छ । किनभने कि तिनीहरूले हुनेछ वा टी, यो देखिन्छ जस्तै यसको.
मलाई थाहा छ को कारण छ छ किनभने
केही सोच्न सक्छ अन्य जात छ । तर केही हृदय छ, त्यसो भनेर मात्र कुरा बनाउन तिनीहरूलाई त्यसो गर्न इन्कार वातावरण छ र धारणा छ ।. म विश्वास छैन, सबै भारतीय केटीहरूलाई लागि प्रतीक्षा सेक्स । बहुमत भारतीय बालिका पकड. यो शो को उच्च मूल्य एक केटी गर्दा त्यो भयो विवाह गर्न । म एम सेतो मान्छे देखि स्वीडेन र मलाई तपाईं बताउन गरौं, म प्रेम चाहन्छु मिति एक भारतीय केटी । सुन्न शत्रुहरू, भारतीय महिला हुन् त सुन्दर छ । सबैभन्दा सेतो मान्छे तारीख गर्न चाहँदैनन् भारतीय केटीहरूलाई तिनीहरू डरले किनभने तिनीहरूले तोड्न हुन सक्छ । किन । किनभने आमाबाबुले सामान्यतया चाहनुहुन्छ व्यवस्थित विवाह को लागि आफ्नो छोरी तापनि विवाह सेतो मान्छे हो आमाबाबुले हुनेछ बचाउनुभयो दाइजो. भएको छ भने मलाई लाग्छ, सेतो मान्छे सम्भावना बढी हुन्छ मिति र विवाह भारतीय महिला छन् जो जस्तै चलचित्र अभिनेता को बलिउड.
राम्रो, नेहा वा कपूर
मलाई विश्वास धेरै सेतो मान्छे थियो मिति भारतीय बालिका । समस्या सधैं नहुन सक्छ । व्यक्तिगत मेरो लागि यसको बस अधिक दृष्टिकोण कुनै पनि केटी भने त्यो. म मा बाँच्न त्यहाँ माथि टी धेरै वरिपरि जहाँ म बाँच्न तर म देख्न के को आकर्षण संग, तिनीहरूलाई लागि मलाई एक नर्वेजियन म देख्न के को आकर्षण संग भारतीय बालिका तर ती जो थिएनन् सार्ने यहाँ, महिला जो आफ्नो रंग छाला धेरै बिग्रेको हो र खोक्रो आज, म प्रेम थियो मिति एक भारतीय महिला देखि भारत, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण
← निगरानी अनलाइन आईपी क्यामेरा मा भारत
प्रेम भारत मा च्याट डेटिङ साइट नवीनतम द्वारा →